Horudhac: Barcelona Vs Real Madrid Ee Semi-finalka Spanish Super Cup, Wararka Labada Koox Iyo Shaxda Macquulka
HomeWararka CiyaarahaHorudhac: Barcelona Vs Real Madrid ee Semi-finalka Spanish Super Cup, Wararka Labada Koox iyo Shaxda Macquulka
January 12, 2022 Wararka Ciyaaraha, Falanqeynta Kulamada, Horyaalka Spain 0
Barcelona iyo Real Madrid ayaa caawa foodda isku dari doona garoonka King Fahd Stadium ee waddanka Sucuudi Carabiya. Waxay ku dagaallayaam semi-finalka Spanish Super Cup oo midkooda guuleysta uu iska xaadirin doono finalka.
Real Madrid ama Barcelona midkooda guuleysta, waxa uu sugi doonaa Athletic Bilbao ama Atletico Madrid oo habeen dambe wada ciyaari doona. Axadda ayaa la ciyaari doonaa Finalka, waxaanay xaqiiqadu tahay in Real Madrid iyo Barcelona uu midkood ka hadhayo oo aanu kasoo muuqanayn finalka.
Barcelona waxa ka maqan Eric Garcia oo dhaawac looga saaray ciyaartii Granada, waxaana la filayaa in muddo shan toddobaad ah uu garoomada ka maqnaan doono.
Sidoo kale, Sergi Roberto iyo Martin Braithwaite ayaan wali taam kasoo noqonin dhaawacyo, has eyeeshee Pedri iyo Ferran Torres ayaa diyaar ah oo loo ogolaaday inay ciyaaraan kaddib markii ay kasoo bogsadeen fayraska Korona. Sidoo kale, Frenkie de Jong, Ronald Araujo iyo Ansu Fati ayaa iyagana lagu soo daray liiska kooxda.
Gavi ayaa ganaax ku seegaya ciyaartan, halka Clement Lenglet uu buuxin doono booska uu banneeyey Garcia.
Dhinaca Real Madrid, Carlo Ancelotti ayaa xaqiijiyey in Mariano Diaz iyo Gareth Bale aanay taam u ahayn semi-finalka Spanish Super Cup, hase yeeshee diyaar ah Dani Carvajal iyo Luka Jovic oo kooxda u raacay safarka.
Carvajal ayay suurtogal tahay inuu difaaca midig ka beddelo Lucas Vazquez, waxayse u badan tahay in Ancelotti aanu isbeddel ku samayn doonin afartiisa dambe oo ay iska garab ciyaari doonaan Alaba, Militao, Mendy iyo Vazquez.
Saacada (22:00 pm Somalia) (20:00 pm Yurub)
Garoonka King Fahd Stadium